Sodium chloride ihlinzeka ukubaluleka njalo ingcindezi osmotic. Kuqukethwe imali 0.5-0.9% egazini futhi izicubu uketshezi. Ngaphansi kwezimo ezivamile sodium chloride is udle nge ukudla, kodwa kunezimo eziningi lapho inani ketshezi uwela, okuholela imiphumela ethize. Ezimweni eziningi, i-sodium chloride kusilela kwenzeka ngenxa excretion anda sodium futhi akukho isinxephezelo yalesi simo. Sodium ngokushesha kakhulu excreted izimo eziningi, njengesifo sohudo, ukuhlanza ezinzima futhi ukwehla umsebenzi cortex we nezindlala adrenal.
Lapho umzimba livela sodium chloride ukuntula kuholela viscosity kwegazi njengoba igazi uqala ukungena ogangeni semithambo phakathi enyameni ezungezile (edema kwenzeke). Uma Nokho, kusilela abalulekile ngaphambi ukuthi abazange babe ukwenza, kungase kuvele zibe okungazelelwe kwemisipha bushelelezi, futhi lwamathambo imisipha ukudikiza. Kamuva, izimpawu ukungasebenzi isimiso sezinzwa futhi kwegazi nobunzima.
Kuze kube manje, i-sodium chloride ngokuvamile kakhulu kusetshenziswa imithi njengoba isixazululo kwezokuphatha emthanjeni. Kuye ngokuthi lokuhlushwa izinto isixazululo, isotonic futhi hypertonic okhetheke khulu. Ikhambi isotonic ine ingcindezi osmotic elilingana ingcindezi osmotic of plasma, lesi sisombululo ubizwa nangokuthi nosawoti. isixazululo Hypertonic, yena, ine ingcindezi osmotic kunakunoma e-plasma.
Ukubukeka rstvora "sodium chloride" (kwezokuphatha ngomjovo) uketshezi kungekho nto enemibala emihle kokuba ukunambitheka kancane okunosawoti. Imfuneko iyona inzalo egcwele isixazululo kanye apyrogenicity yayo (akufanele kukhushulwe izinga lokushisa komzimba womuntu uma iqondiswa).
Isikhathi esining impela sodium isotonic isixazululo chloride isetshenziswa njengophawu dezontoksikatsii izindlela. Ngokwandisa afundwa umthamo wegazi into enobuthi isheshe kusulwe emzimbeni by izinso noma inactivated by esisuka ukugeleza kwegazi ngokusebenzisa isibindi.
Sodium jikelele chloride isetshenziswa esimeni lapho ukulahlekelwa woketshezi iyakhula i umzimba (ukutheleleka ezahlukene ephelezelwa ukuhlanza ezinkulu kanye nesifo sohudo, ukusha, ukopha olubanzi, ikakhulukazi ngaphambi kokumpompela igazi). Lokhu kuqinisekisa ekugcinweni kokuthula nokuzinza esegazini yokucindezela osmotic enikeza plasma ngalé kwemingcele izitsha futhi inikeza evamile igazi viscosity.
Umuthi 'sodium chloride ". Imiyalelo ukusetshenziswa
Isixazululo kufanele iqondiswa noma ngemithambo yegazi noma phansi kwesikhumba. Futhi, i-sodium chloride kungenziwa kuphethwe enema. Kodwa lo main nokuningi ayethanda kuyinto isixazululo ukuvuza emthanjeni. Inani isixazululo kufanele zincike inani uketshezi elahlekile. Ezimweni ezinzima kakhulu (ukudakwa eqinile, ukusha olubanzi, njll) kanye zolimo amalitha amathathu.
Properties of sodium chloride. side effects
Sodium chloride iyona kwakwakhe usawoti eziqukethwe oketshezini olungenambala lwegazi. Ngenxa ingcindezi osmotic adalwe ke, igazi abakwazi ukushiya ukusakaza igazi, kodwa ngokushesha nje lapho emakamu sodium incipha, kudinga yokutakula ngokushesha sokuqanjwa plasma. Kwezinye izimo, ukwethulwa sodium chloride has nemiphumela engemihle. Uma isamba ngokweqile isixazululo lwaqala, lokhu kungase kuholele ekubeni acidification (ukwanda lemali chlorine ion kuholela lactic). Ngaphandle-ke kungenzeka gipergidrotatsii (ukwanda eziqukethwe uketshezi lomzimba), kanye excretion anda potassium.
Medicine 'Amiodarone'. Yokusetshenziswa
Float rod ukudoba: catch Pike ku lolo bukhoma